ရေနံဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ဘို့ Polyethylene ထည် ရေနံဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ဘို့ Polyethylene ထည် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Multi- ရည်ရွယ်ချက်အတွက် Woven Polyethylene အထည်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွမ်းကျင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည် ရေနံဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ဘို့ Polyethylene ထည် ပိုပြီးမျက်ရည်နှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံဖြစ်စိတ်ကြိုက်နေကြသည်။
HDPE နှင့် LDPE granules များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်အထည်ရက်လုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးချည်အရည်အသွေးသေချာစေရန်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ပျက်စီးမှုမှတစ်ဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကိုအနီးကပ်လိုက်နာရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PE အထည်များသည်လိပ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြားချပ်ချပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အရောင်ခြယ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းရှိပြီးနိုင်ငံတကာတင်ပို့မှုအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်လျော်သောထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ သင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်
သို့မဟုတ်အခြား applications များ, အခမဲ့ခံစားရသည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ တစ် ဦး ကိုးကားသည်။
ဘုံအသုံးပြုမှု:အစိုင်အခဲ ၂၅ ကီလိုဂရမ်အထိထုပ်ပိုးနိုင်သည်/granular ရေနံဓာတုပစ္စည်း,င.ဆ.ရေနံဓာတုအလွှာ,ဒြပ်အမျှင်,ရာဘာ,ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ပိုလီမာ.
ကျနော်တို့ PP ၏ထုတ်လုပ်သူ ဦး ဆောင်နေကြသည်/PE ပေါင်းစပ်အိတ်များနှင့်ထိုင် ၀ မ်ပစ္စည်းများ,နှင့် PP ၏မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးစူးစမ်းဖို့သင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ပျော်ရွှင်ကြသည်/PE ထည်နှင့်ထုတ်ကုန်ယက်.ကျွန်ုပ်တို့၏ PE အိတ်များသည်အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ဖြည့်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်,ကုန်ပစ္စည်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/woven-polyethylene-fabric-for-petrochemical-storage.html
အကောင်းဆုံး ရေနံဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ဘို့ Polyethylene ထည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ရေနံဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ဘို့ Polyethylene ထည် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ